Bodo, etsy amin’ny CCEsca Antanimena
Somary nangingina ny fampahafantarana, kanefa tena hisy ny seho izay iarahana amin’i Bodo anio, manomboka amin’ny 7 ora alina, etsy amin’ny CCEsca Antanimena. Handahatra ireo hira nankafizan’ny maro azy hatramin’izay, miampy ireo hira faramparany, izay nampahafantariny nandritra ny fankalazana ny faha-25 taona an-tsehatra tamin’ny taon-dasa i Bodo. Ny Lions Club Antananarivo Manjakamiadana no mikarakara ny seho “Satria tiako…”
Mika sy Davis eny amin’ny Trass
“Ravoravo” indray ny mpankafy, satria dia ho hita an-tsehatra indray i Mika sy Davis. Manome fotoana etsy amin’ny Trass Tsiadana indray izy mirahalahy ireto anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Rehefa elaela tsy heno, ho heno sy hita indray ny aina vao nentin’ireto mpanakanto ireto tamin’ny mozikany. Fantatra mantsy fa nisy ireo nasiam-panovana ary maro koa ny hira vaovao, izay haseho ny mpankafy amin’izay.
Tarika Kiaka, etsy Soarano
“Takariva Rock”, iarahana amin’ny tarika Kiaka indray ny anio alina, etsy amin’ny PK 0, Soarano. Hetsika ho fanomanana sahady ny faha-30 taonan’ny tarika ity, sady famaliana ny hetahetan’ireo mpankafy ihany koa. Maro mantsy ireo mangataka isaky ny mahita mpikambana ao amin’ny tarika, ny mba hanaovana seho hataon’ny Kiaka irery. Maro hisafidianana ny hiran’ny tarika hatramin’izay, izay tsy ho vita ao anatin’ny seho indray alina avokoa.
Ifanihy etsy amin’ny Karibotel
“6 amby 5”. Tsy dia fanaon’Ifanihy matetika, saingy hanamarika ny tsingerintaona nahaterahany izy ny alahady 28 febroary izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, eny amin’ny Karibotel Analakely. Izy no tompom-pety fa izy ihany koa no hanolotra ny kanto ho an’ireo mpankafy ny vazo miteny, izay mpanaraka azy hatramin’izay. Hitety vanim-potoana maromaro an-kira tao anatin’izay nolalovany izay mantsy ity mpanakanto ity amin’io.